Mesut Ozil oo iska diiday dalab aan la diidi karin si uu u sii joogo kooxda Arsenal – The Voice of Northeastern Kenya
Mesut Ozil oo iska diiday dalab aan la diidi karin si uu u sii joogo kooxda Arsenal
Star FM November 14, 2018
Wargeyska “Online-sport” ayaa daaha ka qaaday dalab qaali ah oo uu iska diiday laacibka kooxda Arsenal ee ee Mesut Ozil uu ka helay Asia xili ciyaareedkii lasoo dhaafay, si uu u saxiixo heshiis cusub isla markaana uu u sii joogayo Gunners.
Laacibiinta kooxda Arsenal ee kala ah Mesut Ozil iyo Alexis Sanchez ayaa waxay ku dhawaadeen in ay ka dhaqaaqaan safka kooxda Arsenal ilaa ugu dambeyntii uu kooxdaasi isaga tagay Sanchez halka Ozil uu ogolaaday inuu sii jooga kooxdaasi.
Mesut Ozil ayaa kooxda Arsenal u saxiixay heshiis cusub oo uu isbuucii ku qaadanaayo mushaar dhan 350,000.
Laacibkan oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay inuu iska diiday dalabyo uu ka helay Asia oo uu ku qaadan lahaay mushaar waali ah.
“Xaqiiqdii lacagtu waa muhiim, laakiin waa in ay dadku ogaadaan awooda kubada cagta inay tahay qeyb ka mid ah wada hadalada, qiimaha suuq geynta ciyaaryahanka ayaa wuxuu haatan noqday mid muhiim u ah wada hadalada”.
Mesut Özil ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu badan ay isha ku hayaan warbaahinta iyo baraha bulshada ee ku sugan horyaalka Premier League.
Maaliyada maaliyadiisa ayaa waxay tahay tan loogu iibsasha badanyahay kooxda Arsenal caalamka oo dhan.
Hasa ahaatee Ozil ayaa haduu aadi lahay Asia wuxuu todobaadkii u qaadan lahay mushaar dhan £ 1 milyan inkastoo uu iska diiday si uu u sii joogo kooxda Arsenal, isla markaana uu heshiis cusub u saxiixo Gunners.
← DHAGEYSO Barnaamijka Madasha, Waanada waxgaradka 14-11-2018
Arsenal oo Wakiila u dirtay Gianluca Mancini si ay u soo daawdaan. →